MCPA Member Mobile App. အတွက် ရွေးချယ်စိစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း။ – MCPA (Myanmar Computer Professionals Association)
MCPA Member Mobile App. အတွက် ရွေးချယ်စိစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း။
November 25, 2019 / Comments Off on MCPA Member Mobile App. အတွက် ရွေးချယ်စိစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ အသင်းဝင်လိုသူများ လျှောက်ထားခြင်း၊ အသင်းဝင်များ သက်တမ်းတိုး ခြင်း၊ Event များအတွက် အသင်းဝင်များအား ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အသင်းဝင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးများကို Online Payment ဖြင့် ပေးဆောင်ခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သော MCPA Member Mobile App. ရေးသားဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၁.၇.၂၀၁၉ နေ့ရက်မှ၊ ၁၃.၇.၂၀၁၉ နေ့ရက်အထိ EOI (Express of Interest) ခေါ်ယူခဲ့ရာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများမှ အဆိုပြုတင်ပြလွှာများ ပေးပို့ခဲ့ကြပါသည်။
• အဆိုပြု ကုမ္ပဏီပေါင်း (၉) ခုမှ အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
• စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက ၁၃.၇.၂၀၁၉ အဆိုပြုလွှာများကို ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခဲ့ပါသည်။
• စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသို့ အဆိုပြုသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီအား (၃၁.၈.၂၀၁၉) ရက်တွင် လာရောက် ရှင်းလင်း ပြသစေခဲ့ပါသည်။
• ထိုကုမ္ပဏီများထဲမှ အဆိုပြုလွှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ညီညွတ်သည့် ကုမ္ပဏီ (၄) ခုကို ရွေးချယ်၍ (၅. ၉. ၂၀၁၉) ရက်တွင် အဆိုပြုလွှာများနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။
• နောက်ဆုံးကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ (၃) ခု၏ အဆိုပြုလွှာများကို စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက အဖွဲ့ဖြင့် အကဲဖြတ် အမှတ်ပေး ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင် တစ်ဦးချင်းပေးသော အမှတ်ကို အဆိုပြုလွှာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် စုပေါင်း ရယူခဲ့ပါသည်။
• အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများထဲမှ ရမှတ်အများဆုံးဖြစ်သော Binary Lab Co.,Ltd. အား စိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်။